Saddex askari oo Turki ah oo lagu dilay waqooyiga dalka Suuriya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldSaddex askari oo Turki ah oo lagu dilay waqooyiga dalka Suuriya
November 24, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Askartii ku dhimatay iyo kuwii ku dhaawacmay, ayaa loo qaaday isbitaalo kuyaala gobolada koonfurta ee Kilis iyo Gaziantep. [Sawirka: AP]
Istanbul-(Puntland Mirror) saddex askari oo Turki ah ayaa lagu dilay 10 kalena waa lagu dhaawacay weerar ka dhacay waqooyiga dalka Suuriya.
MilatarigaTurkiga ayaa sheegay in askarta ay duqaymo la beegsadeen dowladda Suuriya subaxnimadii hore ee maanta oo Khamiis ah, intii uu socday weerar u dhaxeeyay falaagada Suuriya ee Turkiga uu dabada ka riixayo iyo kooxda loogu yeero ISIS.
Si kastoo ay ahaataba, kooxda kormeerka Suuriya ayaa sheegtay in dhimashada ay sababtay weerar isbiimayn ah oo ay masuuliyadiisa sheegatay ISIS.
Dowladda Suuriya wali kama aysan jawaabin.
Lama sheegin deegaanka saxda ah ee uu ka dhacay dhacdada, balse wakaalada wararka dowladda Turkiga ee Anadolu ayaa warisay in uu ka dhacay meel u dhow al-Bab.
Askartii ku dhimatay iyo kuwii ku dhaawacmay, ayaa loo qaaday isbitaalo kuyaala gobolada koonfurta ee Kilis iyo Gaziantep.
Wakaalada lala xiriiriyo in ay afka ISIS ku hadasho ee Amaq ayaa sii daysay muuqaal muujinaya gaari hubaysan oo maraya jiida hore kadibna qarxaya.
Wakaalada lala xiriiriyo in ay afka ISIS ku hadasho ee Amaq ayaa sii daysay muuqaal muujinaya qaraxa. [Sawirka: Amaq]
Dhimashada saddexda askari ayaa la macno ah in 15 askari oo Turki ah la dilay tan iyo markii ay howlgalka ku qaadeen waqooyiga Suuriya.